Sambatra Chanukah avy amin'ny tanin'ny fahagagana: Syria
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Sambatra Chanukah avy amin'ny tanin'ny fahagagana: Syria
Desambra 15, 2017
Ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny asa fizahan-tany, na dia hafa tsy mitovy aza ity karazana fizahan-tany ity. Ity dia fisakaizana tsy manam-paharoa sy Chanukah Sambatra: Syriana sy ny mpamonjy ny tafika Israeliana.
Androany maraina rehefa avy nitsidika toerana arkeolojika mahavariana iray tamin'ny taonjato voalohany izahay dia nifindra tany amin'ny hopitaly Ziv tany amin'ny faritry Tzfat. Raha ny mahazatra, ny hopitaly dia tsy toeram-pizahantany, fa io sy ny hopitaly rahavaviny manerana an'i Galilia dia tsy mahazatra. Amin'ny toerana toa an'i Ziv, ny miaramila Syriana dia entina amin'ny alina maty. Nankany Syria ny tafika mba hamonjy ireo marary sy naratra. Ny sasany kosa manana namana na fianakaviana mitondra azy ireo any amin'ny sisin-tany izay nanaraha-maso sy nodiovina rehefa nentina tany amin'ny hopitaly israeliana. Ireo lehilahy ireo, sahabo ho 90% dia lehilahy, omena fitsaboana betsaka raha mbola ilain'izy ireo maimaimpoana izany. Ankehitriny dia misy singa fanampiny ho an'ny vehivavy sy ny reny ary ny zaza.
Nandany adiny iray teo izahay niaraka tamin'ny efatra tamin'ireo lehilahy ireo, ny iray angamba 17, roa teo amin'ny faha-50 taonany, ary ny iray dia lehilahy antitra efa ho XNUMX taona. Ny manam-pahefana syriana dia nampianatra ireo lehilahy ireo tamin'ny fiainany manontolo hankahala ny jiosy. Ankehitriny dia mikarakara azy ireo ny jiosy, samy natahotra izy ireo nandritra ny andro vitsivitsy nandehanany tany amin'ny hopitaly ary samy nijaly mafy.
Mazava ho azy fa tsy manana adidy ara-dalàna ny Israeliana hanasitrana ireo izay amin'ny toe-javatra hafa dia zatra hamono azy ireo, ary na dia nilaza aza ny dokotera israeliana, ny asany dia ny manasitrana ary tsy mandratra mihitsy. Io ilay antsoina amin'ny teny hebreo hoe "tikkun olam- ny fanamboarana tontolo vaky". Ny an'ny jiosy dia tsy ny fivavahana jiosy teôria, izy io dia ampiharina amin'ny fivavahana jiosy izay ny famonjena aina, pikuach nefesh, no lohalaharana amin'ny zavatra hafa rehetra.
Eto amin'ny hopitaly st Ziv dia mahita lehilahy tsy manana fanantenana isika, ary tsy mahita rantsambatana ankehitriny, omena fanantenana sy rantsambatana. Ny dokotera israeliana dia nitatitra fa nahafantatra zavatra betsaka momba ny fitsaboana eny an-tsahan'ady izy ireo, ary mampalahelo tokoa fa nahita zavatra be loatra izy ireo. Ny ady an-trano Syriana dia 500,000 XNUMX no maty ary tsy misy mahalala hoe firy no naratra.
Israel dia voatery namorona karazana fanafody vaovao. Ny dokotera, ny mpiasa sosialy, ny mpitsabo marary ary ny psikology dia tsy maintsy mamorona ekipa miray hina. Mazava ho azy fa tsy misy firenena hafa eto amin'izao tontolo izao mety hanana risika lehibe handray miaramila avy amin'ny firenena fahavalo, hanasitrana azy ireo ary hanao izay ilaina ara-pitsaboana hamerenana azy ireo amin'ny fiainana mamokatra. Telopolo kilaometatra monja miala ny hopitaly Ziv no sisin-tany Syriana, any an-dafin'ny fahafatesana no miparitaka ary tsy misy fitsaharana.
Nandritra ny fitsidihanay ireo lehilahy ireo dia niditra am-pilaminana ny hopitaly tao anaty lovia feno "sufganiyot" (donn Hanukkah). Tianay ireo lehilahy Hanukah falifaly, zavatra mampidi-doza holazaina ao Syria. Rehefa nisakafo ny miaramila Syriana dia afaka nanambara ny tsy azo eritreretina izy ireo: Chag Sameach / Fetim-pifaliana.
Eto amin'ny zavatra nampianarina azy ireo dia ny faritry ny fahavalo ireto lehilahy tapaka ireto (sy amin'ny vehivavy hafa sy ny ankizy any an-toeran-kafa, nahazo ny fanomezana Chanukah tsara indrindra; ny fanomezana ny fanasitranana ary ny dokotera israeliana ho valin'izany, dia nahazo ny fanomezana manampy amin'ny fanaovana an'izao tontolo izao somary tsara kokoa, hanome fiainana sy fanantenana ho an'ireo izay nahafantatra ny fahafatesana sy fanaintainana ihany.
Chanukah dia momba ny fahagagan'ny mazava mandresy ny haizina, ny fanantenana izay nisy famoizam-po fotsiny. Tao, ny efitranon'ny hopitaly, ilay andian-teny hita isaky ny alina - fahagagana lehibe no tonga teto, fa tsy bala dia nifampiarahaba fety sy fifanaovan-tsoa ny jiosy sy ny arabo ary noho ny asan'ny dokotera be herim-po mizara jelly donut sy fanantenana.
Ny fahatongavana eto dia tsy finoana fotsiny ny fahagagana, fa ny fahitana azy ireo eo imason'ny olona ary hahafantarana fa marina izany,
Sambatra Chanukah avy amin'ny tanin'ny fahagagana.
Flydubai mikitika any amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kilimanjaro
Afrika Atsinanana: toerana mandrahona ny LGBTQ